Oromooti 12 Yaada Ummataa Jijjirtanii Fincila Nurratti Kaasifatan Jechuun Magaalaa Jimmaatti Hidhaman.Ummanni Humnaan Hiriira Bahee Wayyaanee akka Deggeru Dirqames Hiriiricha Mormii Wayyaaneen Ibsate | QEERROO
Posted on July 31, 2012 by Qeerroo
2 thoughts on “Oromooti 12 Yaada Ummataa Jijjirtanii Fincila Nurratti Kaasifatan Jechuun Magaalaa Jimmaatti Hidhaman.Ummanni Humnaan Hiriira Bahee Wayyaanee akka Deggeru Dirqames Hiriiricha Mormii Wayyaaneen Ibsate”
obsaa on July 31, 2012 at 11:48 am said:
Woyyaanee irratti kallattii hndaan waraana banuu barbaachisa. karaa mana sagadaa mirga ofii eegsifachuun isa tokko.
Abdi Sabaa on July 31, 2012 at 7:22 pm said:
Oromo people (ummata Oromo), malif bakka takka olhin kaanee? Fincila diddaa garbrumma bakka jiratan hundaa olka’a fininsaa. Meles du’uus kan isarra hamatu nugabroomsuuf qophawa jiraa, iddoo jiratani Finciall!